Nhau - USB-C PD kuchaja
USB-C PD kuchaja
Ko kana tambo dzako dzaigona kunamatira kune magineti, dzichigadzira coil yakachena isingabatike mumadhirowa nemabhegi ako? Ko dai dzaivewo tambo dzakanaka dzaigona kuchaja nekuyananisa zvese kuburikidza ne USB-C, Mheni, nezvimwewo?
Zvakanaka…iwe unogona ikozvino kutenga USB tambo inopedza chikamu chekutanga!Uye dzakatonhorera zvekuti ndinovimba vanogadzira tambo vanogadzirisa zvimwe.
Kwemavhiki mashoma apfuura, ndanga ndichiedza dzimwe tambo dze USB dzakanyanya kuita magineti nyoka.Pakutanga dzakaunzwa kune vanhu vanotaura Chirungu nemhando inonzi SuperCalla, dzava kutengeswa nemhando dzakawanda dzisinganzwisisike dzinosanganisira. Amazon uye Alibaba.Ivo matoyi anoshamisa, sekuvimbisa kweSuperCalla's Indiegogo makore anopfuura maviri apfuura:
Sezvauri kuona mumufananidzo wangu pazasi, iwo akanyatsokombwa seGIF!Haasi chaizvo "kuzvifambisa-mhepo" sekutaura kunoita vamwe vatengesi, asi iwo-mamita matanhatu ari nyore kurongedza.
Uye, hongu, unogona kuzvibatanidza kune zvimwe zvakasiyana-siyana zvimwe zvinhu zvesimbi uye kubhadhara tambo dzakawanda sezvaunoda. Ini zvino ndine tambo imwe yakarembera kubva pamiraiti yangu yesimbi, imwe pakona yangu, uye imwe inomhanya zvakanaka kumucheto. yekhibhodi yangu apo foni yangu iri kuchaja:
Wagadzirira kubatwa here?Ndakatenga mhando ina dzakasiyana dzetambo, uye dzose dzakatora nguva yakawanda (ndiro izwi rehunyanzvi) rekufambisa data, kuchaja, kana zvese.
Iyi zvakare ine yayo yakavakirwa-mukati yebhuruu LED mwenje uye magineti inotsiviwa matipi e USB-C, micro-USB, uye Mheni, haingabhadharise akawanda angu USB-C gadget zvachose, asi ini ndinogona kuiturika ne USB 2.0 inomhanyisa Mamwe mafaera kubva kune inononoka yekunze dhiraivha uye kuchaja iPhone yangu kuburikidza neMheni.Iyo zvakare ine super weak coil magineti uye inonzwa yakachipa kupfuura mamwe.
Iyi USB-C ku USB-C inochaja zvakanaka, inondipa 65W ye USB-C PD simba, uye ine magineti akanakisa mukirasi yayo - asi haizobatana nePixel 4A foni kana yangu USB -C Drive kunze. Ivo havangoratidzike padesktop yangu!
Iyi USB-A ku USB-C tambo ndiyo yakaipisisa.Kungozunza-zunza inobvisa chero chinhu chandinoisa mukati, uye inobuda pa10W yekuchaja simba - kwete 15-18W yandinowanzoona paPixel.
Pakupedzisira, iyi USB-A kuMheni inoita kunge SuperCalla tambo inouya mubhokisi re "Original SuperCalla", kunyange zvazvo inotengeswa nemhando inonzi "Tech" iva nekubatana kwakasimba ne iPhone yangu.
Asi aya handiwo ega magineti tangle-asina tambo dzandawana.Ndakatengawo accordion iyi yakanyatso tsvinda uye ingangove yakanyanya kunaka: Ndine 15W yekuchaja uye inonzwa zviri nani pane yese.
Asi hazvinakidze kutamba, magineti haina kusimba, uye chimiro chayo hachina kugadzikana kana yakawedzerwa zvizere nekuti majoini anogara akamira kunze.Uyezve, ine USB 2.0 inomhanya inosvika 480Mbps (kana kutenderera 42MB/s). chaizvoizvo).Handigoni kuwana C-to-C kana Mheni shanduro.
Ndaizobhadhara mari yakawanda kune yakasimba, yakavimbika 6-tsoka USB-C kuenda ku USB-C nyore-kupeta tambo ine magineti akasimba, 100W USB-C PD kuchaja, uye ingangoita 10Gbps ye USB 3.x bandwidth.
Kana kuti, kana ndiri kunyatsorota, ko 40Gbps pamusoro pe USB 4? Ngatibudei tose uye tivake tambo yekupedzisira - ipa iyo yakavakirwa-mukati magetsi mita paunenge uchiishandisa.
Ikozvino, chandawana chete itambo idzi dzakachipa, $10 novelty, zvinonyadzisa.Magnet design inofanirwa nani, nesuwo.
Nguva yekutumira: Jun-13-2022